ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): အချိန်ယူပြီး သွားတိုက်ပါ ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): အချိန်ယူပြီး သွားတိုက်ပါ
လူအများ စုက သွားမှန်မှန် တိုက်ပေမယ့် ဘယ်လောက် အချိန် ကြာကြာ သွားတိုက် သင့်တယ် ဆိုတာ မသိကြ ပါဘူး။ တကယ်တော့ သွားတိုက်တဲ့ အချိန်ကို ၂ မိနစ်လောက် ပေးသင့် တယ်လို့ လေ့လာ သူတွေက ဆိုပါ တယ်။
ဒါမှသာ သွားတိုက်ဆေးက ခံတွင်း ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပိုးမွှားတွေကို ပျက်စီးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွားပွတ်တံကို စာရေးတဲ့ အခါ ဘောပင်ကို ကိုင်သလို ကိုင်ပြီး သွားတွေ အပြင် လျှာနဲ့ အာခေါင်၊ ခံတွင်း တခုလုံးကို တိုက်ချွတ် ရပါမယ်။
သွားပွတ်တံကို ဖန်စီ ဖြစ်တာတွေ၊ ထောင့်ချိုး သွားပွတ် တံတွေ သုံးစရာ မလိုပါဘူး။
နူးညံ့တဲ့ အမွေးအမှင်တွေ ပါတဲ့ သွားပွတ်တံကို အသုံးပြုရုံနဲ့ လုံလောက် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Original link - http://blog.irrawaddy.org/2015/11/blog-post_91.html
Posted by Te Tee at 7:53 PM
art and music December 1, 2015 at 10:35 AM
A public school teacher who has half of their art class receive failing grades will still be paid the same at the end of the week. Just visit this site www.olhon.org ready in private art instruction world would meanabankrupt business inavery short order. Providing private art classes isabusiness. They must produceagood product or risk not being around in the future.